Xiaomi Mi 10 Lite Gray (8GB/256GB) ~ ICT.com.mm
HomeXiaomi Mi 10 Lite Gray (8GB/256GB)
Xiaomi Mi 10 Lite Gray (8GB/256GB)
Model: Mi 10 Lite Display: 6.57-inch Storage: 256 GB Camera: 48+8+8+2 MP Battery: 4160 mAh non- removable battery, 22.5W fast charging Sensors: Fingerprint SIM Card: Dual Nano SIM card slots Operating System:... [Learn more]
Brand: XiaomiSKU: 164399N/ASee more: Mobile Phone, Mobile Phones, New Arrivals, Products, XiaomiFilter by: EDIT-ONE, outofstock, Smartphones
Camera: 48+8+8+2 MP
Battery: 4160 mAh non- removable battery, 22.5W fast charging
SIM Card: Dual Nano SIM card slots
Operating System: MIUI 11 base on Android 10 OS
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလမှာမှ ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Xiaomi Mi 10 Lite စွမ်းရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.57” နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး Samsung ရဲ့ နာမည်ကျော် Super AMOLED Display ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ FHD+ resolution (1080 x 2400 pixels) ဖြစ်တဲ့အတွက် အရောင်အသွေးက လုံးဝစိုပြည်တောက်ပနေမှာဖြစ်ပြီး HDR 10 ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ System ပိုင်းမှာဆိုရင် Qualcomm Snapdragon 765G Chipset ကိုအထိုင်ချထားပြီး Octa-core CPU (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) ကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် လျင်မြန်သွက်လက်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ RAM 8GB ကို တပ်ဆင်ထားပြီး Adreno 620 ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် Game တွေကို ရုပ်ထွက်လှလှပပနဲ့ စိတ်ကြိုက် ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Internal Storage – 256 GB ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် သီချင်း၊ ဗီဒီယိုနဲ့ ဒေတာတွေကို စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကို အလှပဆုံးရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ နောက်ကျောဘက်မှာ 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide),5MP (macro) နဲ့2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Dual-LED flash မီးနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး HDR နဲ့ Panorama တို့ကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ 30fps အနေအထားနဲ့ 4K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကိုတောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Selfie ရိုက်ကူးဖို့အတွက် 16 MP (wide) ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး HDR နဲ့ Panorama တို့ကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 4160 mAh ပါဝါအားရှိတဲ့ ဘတ္ထရီကိုတပ်ဆင်ထားပြီး 22.5W Fast Charging အမြန်အားသွင်းစနစ်နဲ့ လျင်မြန်စွာအားပြန်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက် Fingerprint Sensor ကို မှန်မျက်နှာပြင်အောက်မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Android 10 (MIUI 11) နဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး Google Play ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် PlayStore Error ကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အဖြူ၊ အပြာ၊ မီးခိုးရောင်တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi Mi 10 Lite 5G is powered with 7nm Qualcomm Snapdragon 765G processor that includes one Kryo 475 Prime (Cortex-A76) CPU working at 2.4GHz, one Kryo 475 Gold (Cortex-A76) CPU clocking at 2.2GHz, and six Kryo 475 Silver (Cortex-A55) working at 1.8GHz. It is paired with Adreno 620 GPU, the 6GB/8GB of RAM delivers outstanding overall performance for opening and running applications, flipping through menus, running home screens and more.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G featuresa6.57-inch Super AMOLED display that offersatall aspect ratio of 20:9 and FHD+ resolution of 1080 x 2400 pixels. The screen supports HDR 10 display.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G has 48MP+8MP+8MP+2MP quad camera setup, includea48-megapixel main sensor with an f/1.79 aperture, an 8-megapixel ultrawide lens with 120-degree field-of-view, an Periscope 8 MP anda2-megapixdel depth assist lens. It also includesa16MP front-facing camera for self-portraits and video.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G is equipped with 4160mAh battey supporting 22.5W fast charging.